Overcome COVID-19 crisis | Happy Sales - POS Supply
ဒီအချိန်မှာ သင့်လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ?
လက်ရှိ ကမ္ဘာအနှံအပြားမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုး ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး စီးပွားရေးကျဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်နေတာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ...
ဒီ Crisis ကြီး ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဥ်ပြုလုပ်နေကြအရာတွေဟာ ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်...
Online ကနေပဲ ဈေးဝယ်နေကြပါပြီ...
Video Conferencing အပြင် အခြားသောအရာတွေနဲ့အတူ Work from Home သူ အရေအတွက်ကလည်းသိသိသာသာတိုးလာကြပါပြီ...
ဒီတော့ ဒီ Crisis ကြီးကနေ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်း Survive ဖြစ်ဖို့ အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုအရာတွေကို ပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
“Cash is King”(ငွေကြေးဟာ ဘုရင်ပါပဲ)
သင့်မှာ လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးပမာဏရှိမှသာ ဒီ Crisis ကြီးကို အောင်အောင်မြင်မြင်ကျော်လွှားဖို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်...
ဒီတော့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ငွေကြေးစီးဆင်းမှု(Cash Flow)တွေကို ရေတိုအတွက်ရော၊ ရေရှည်အတွက်ပါ သေချာပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်...
ဥပမာ - ဘာတွေရစရာရှိလဲ? ပေးစရာကကော ဘယ်လောက်ရှိလဲ? ဝင်ငွေရအောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို သေသေချာချာ စိစစ်ပြီးပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်...
ဒီနေရာမှာ လုပ်ငန်းရဲ့ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု(Cash Flow)တွေကို Improve ဖြစ်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဓိကအချက်(2)ချက်ရှိနေပါသေးတယ်...
"Reduce Cash Out"(အသုံးစရိတ်ကိုလျှော့ချပါ)
ဝန်ထမ်းအရေအတွက်လျှော့ချတာတွေ၊ အလုပ်ချိန် ကန့်သတ်တာတွေ၊ လစာလျှော့ချတာတွေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို ကန့်သတ်တာတွေ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့တိုလီထွာလီစရိတ်တွေကို လျှော့ချတာတွေ၊ အခွန်တွေကိုလျှော့ချ/ဆိုင်းငံတာတွေကို နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်....
"Improve Cash In"(ဝင်ငွေတိုးအောင်လုပ်ပါ)
လုပ်ငန်းရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ရန်အတွက် ချေးငွေယူတာတွေ၊ ထောက်ပံ့ကြေးယူတာတွေ အပြင် ရှယ်ယာရှင်ထပ်ခေါ်တာတွေလုပ်သင့်တဲ့အပြင်...
လုပ်ငန်းမှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ Fixed Assets တွေ(ကား၊ လုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာတွေ)ကို ပြန်ရောင်းတာ၊ ငှားရမ်းတာတွေလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း လည်ပတ်ငွေ တိုးလာအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် လုပ်ငန်းမှ Product တွေ၊ Service တွေကို ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ပြီး Discount ပေးတာတွေ၊ Promotion ပေးတာတွေ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ရောင်းအားကောင်းပြီး ဝင်ငွေတိုးလာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
"Take care of your employee"(သင့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပိုပြီးဂရုစိုက်ပေးပါ)
ဒီလိုအချိန်မှာ အားလုံးရပ်နားထားရတယ်ဆိုပေမယ့် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ အဓိကသူရဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ နေရေးထိုင်ရေး၊ စားရေးသောက်ရေးတွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်စွက်ပေးရပါမယ်...
ဒါတွေအပြင် အလုပ်တွေပါးတဲ့ ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို Online ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တတ်နိုင်လျှင် လူတွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရည်အချင်းတွေတိုးတက်လာစေဖို့အတွက် စနစ်တကျ Training ပေးခြင်းဖြင့် Capacity Building လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
"Communicate with Your Stakeholders"(အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါစေနဲ့)
ဒီအချိန်မျိုးမှာ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သတ်သမျှလူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်...
Customer တွေ၊ Supplier တွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေအပြင်တခြားသော Partner တွေနဲ့ပါ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဘဲ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာတောင်မှ လက်တွဲ ကူညီဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်း ပြသပေးရပါမယ်...
ဒီကာလမှာ Website တွေ၊ Facebook page တွေကနေ Partner တွေ အမြဲမပြတ် အဆက်အသွယ်ရှိနေစေပြီး Customer တွေကို ဘယ်လိုဆက်ပြီး Support ပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေ၊ အလုပ်ရှင်နဲ့ ဝန်ထမ်းကြား ဆက်ဆံရေးတွေကိုပါ နွေးထွေးအောင် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်...
“Never WasteaCrisis”(အချိန်တွေ အလဟဿမဖြစ်ပါစေနဲ့)
ဒီ Crisis ကာလကို ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးရှိအောင် အသုံးချမလဲ စဥ်းစားပါ...
ပုံမှန်အားဖြင့် မလုပ်ဖြစ်တဲ့၊ အချိန်ပေးပြီးလုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို အခုချိန်မှာ လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အနာဂတ်အတွက် များစွာ အကျိုးရှိမှာပါ။
တချို့လူတွေတော်တော်များများကတော့ ဒီအခြေအနေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ Digital Transformation ပြုလုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ...
Digital Transformations ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း Computerized System တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်တာ၊ Business Website တွေနဲ့ E-commerce System တွေကို အသက်ဝင်လာအောင် ကြိုးစားပြီးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်...
ဒီအချိန်ဟာ မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ Accounting(စာရင်းဇယားတွေ)၊ Standard Operating Procedures (SOP) တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက်လည်း အချိန်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ...
"Update your Business Plan"(Business Plan ကို အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပါ)
"သေချာပေါက် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရပါမယ်"
ဖြစ်လာမယ့် အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါအရ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လို Market မျိုးတွေ၊ ဘယ်လို Service မျိုးတွေနဲ့ ဘယ်လို Product မျိုးတွေက အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအရာတွေအပေါ်မှာအဓိက Target ထားရမလဲဆိုတာကို လေ့လာဆုံးဖြတ်ရပါမယ်...
ဈေးကွက်အသစ်မှာ Service အသစ်တွေ၊ Product အသစ်တွေနဲ့ ဝင်ရောက်မိတ်ဆက်ရောင်းချနိုင်ပြီး၊ Marketing နဲ့ Sales ပြန်လုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကောင်းတွေ၊ နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေရပါမယ်...
ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ အရင်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Business Plan အဟောင်းကြီးကို ပြင်ဆင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အချိန်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ...
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သင့်လုပ်ငန်းရပ်တန့်မသွားစေဖို့နဲ့ ဒီ Covid-19 ကပ်ဆိုးအပြီး New Normal အခြေအနေတွေအတွက် အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ လည်ပတ်နိုင်စေဖို့ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ပဲ...
လက်လီလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် ရွေးချယ်စရာ POS Hardware များ